‘लकडाउन’मा घरमै बसेर गरौँ योग, बनौँ निरोग | bethanchokkhabar.com
‘लकडाउन’मा घरमै बसेर गरौँ योग, बनौँ निरोग
सोमबार, चैत्र २४, २०७६ | १३:४३:१८ |
काभ्रे (धुलिखेल) – केही दिन अघिसम्म धुलिखेलस्थित इमाथेका मोहन बहादुर गजुरेल बिहानको ५ नबज्दै धुलिखेल योग साधना केन्द्रमा पुग्ने गर्थे । त्यहाँ दिनको दुई घण्टा योग गर्ने उनी देश लक डाउन भएसँगै अचेल घरमै योग गर्छन् । उनका अनुसार योगा गर्नु स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हो । ‘योगले मानसिक र एरोबिकदुवै हिसाबले राम्रो मानिन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको त्रासको समयमा योग गर्दा हाम्रो शरिरलाई धेरै फाइदा मिल्छ । योग गर्दा मष्तिस्कमा सकारात्मक कुराहरु ऋाउने भएकाले दिनको एक घण्टा योग गर्दा राम्रो हुने रहेछ ।’ हाम्रो घरको आँगन, बगैँचा, कौसीमा बसेर पनि योगा गर्न सकिने उनले बताए ।
स्वस्थ शरिरसँगै शरिर फिटनेसको लागि जिम सेन्टर, जुम्बा , एरोबिक जस्ता ठाउँमा नपुगी घरमै बसेर पनि गर्न सकिने वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. दिवाकर शर्मा बताउँछन् । यी कार्य घरमा पनि गर्न मिल्ने भएकाले यो महामारीको समयमा घरबाट बाहिर ननिस्कन उनी सुझाउँछन् । ‘शरिरलाई स्वस्थ राख्न हामीले गर्ने एरोबिकव्यायम हामीले हाम्रै घरको बगैँचाको फ्रेसमा पनि गर्न सक्छौँ,’ उनले थपे, ‘त्यस्तै घरको खुल्ला ठाउँ जस्तै छत र आँगनमा बसेर पनि यी कार्य सकिन्छ । आफ्नो शरिरलाई स्वस्थ राख्न अरु धेरै केही गर्नै पर्दैन । आफ्नो फुर्सदमा घरको छत, बगौँचा, कौसीमा दिनमा ५० राउन्ड मात्र लगाए पनि पुग्छ ।’ डा. शर्माका अनुसार सबै बिरामीले एकैले खाले व्यायम गर्नु हुदैँन, चिकित्सकले सुझाए अनुसारको व्यायम गर्नुपर्छ । यसका साथै यो समयमा खानेकुरामा पनि विशेष ध्यान दिन उनी सुझाउँछन् ।
फुर्सदको समयमा मिष्ठान्न परिकार पकाएर खाने गरिन्छ । यो समयमा हामीले खाएको खाना थोरै मात्र उर्जामा परिणत हुने हुदाँ खाना पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । धेरै मात्रामा चिल्लोपदार्थ बढि भएका खानेकुरा खान नहुने डा. शर्मा बताउँछन् । ‘यो समयमा मानिसहरुले धेरै मोबाइल, इन्टरनेट र टि.भ हेर्दा शरिरमा व्यायमको कमी हुन्छ र यसले गर्दा शरिरमा अरु समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘ त्यसकारण पनि श्रृजनात्मक काम गरेर समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’
रोग नलाग्नको लागि योगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुदाँ, यो महामारीको समयमा स्वस्थ शरिरको लागि योग गर्नु धेरै राम्रो हुने पतंजली योग समिति धुलिखेल नगरका संयोजक राजु श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार योगले शरीरलाई स्वास्थ राख्न र आयू लम्ब्याउने काम गर्नुको साथै मस्तिष्कलाई सफा बनाउँने काम गर्छ । मन स्वास्थ भएको खण्डमा हरेक कुराहरु सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । कोरोनाले मानिसहरुको मष्तिस्कमा त्रास फैलाएको अवस्थामा योगले मानिसलाई मनोवल बढाउने र उत्साह जगाउने काम गर्ने उनले थपे ।
योग सबै व्यक्तिले गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार योगको लागि दिनमा ३० देखि ४५ मिनेट सम्म समय खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ । ‘नियमित योगले खानपान र निन्द्रा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हार्डजोर्नीहरु बलियो हुन थाल्छन् । योग गर्दा १० मिनेट फिजिकल, १० मिनेट श्वास—प्रश्वास र १० मिनेट मनलाई आनन्द बनाउने ध्यान गर्न सकिन्छ । मिलाएर योग गर्न सकियो भने स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ ।’ योग गुरु राजु श्रेष्ठका अनुसार योग खुल्ला ठाउँमा मात्र गर्दा शरिरलाई फाइदा हुन्छ । यो समयमा हामीले हाम्रो बगैँचा, छत र कौसीमा योग गर्न सक्छौँ । उनका अनुसार इन्टरनेट र टिभीको पहुँच हुनेले ती माध्यमबाट योग सिक्न सक्नु हुनेछ भने पहुँच नहुने घरमै बसेर योगी जगिङ, सेटअप, पुसअप, पिटी लगायत पनि गरेर शरिरलाई स्वस्थ राख्न सकिनेछ ।